प्रचण्डको टिप्पणी : केपी ओलीभन्दा कांग्रेस सयौं गुणा वामपन्थी !
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको विपक्षी गठबन्धन सिद्धान्तहीन नभएको दाबी गरेका छन् ।
प्रचण्डले लोकतन्त्र र संविधान बचाउनको लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन बनाइएको दाबी गरे ।
बिहीवार काठमाडौंमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँगको कुराकानीका क्रममा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्माभन्दा कांग्रेस सयौं गुणा वामपन्थी रहेको दाबी गरे ।
‘केपी ओलीले फोन गरेर वामपन्थी सरकार ढालेर कांग्रेसको सरकार बनाउन लाग्नुभयो भन्नुभयो,’ ओलीलाई दिएको जवाफबारे प्रचण्डले भने, ‘कांग्रेस त तपाईंभन्दा सयौं गुणा लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रवादी र वामपन्थी हो ।’
ओलीलाई दिएको जवाफबारे प्रचण्डले अगाडि भने, ‘कांग्रेसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेको छ, तपाईं सिध्याउन लाग्नुभएको छ । लोकतन्त्र बचाऊ भन्ने कांग्रेस दक्षिणपन्थी र संविधान मास्ने तपाईं वामपन्थी कहाँ हुनुभयो ?’
प्रचण्डले पूर्व प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य कुनै देशको विरोधमा नभएको बताए । ‘नेपालको बारेमा निर्णय नेपालीले नै गर्ने हो, प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा विदेशी चलखेल नहोस् भनेर विज्ञप्ति जारी गरिएको हो परिस्थिति गम्भीर नभई गरिएको होइन । यो स्थितिबारे जनतालाई जानकारी नगरे कसले गर्छ ?’ प्रचण्डले भने, ‘पाँच जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले गर्दा त्यो अपील ठूलो हुन्छ भन्ने लाग्यो र गर्‍यौं, हाम्रो जिम्मेवारी पनि हुन्थ्यो । हामी उस्तै भए त विदेशीको आशीर्वाद गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने थियौं ।’
प्रचण्डले सबै नेता उस्तै हुन् भनेर मूल्यांकन गर्दा आफूहरूलाई अन्याय हुने बताए । ‘लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्ने र आन्दोलनको विरोध गर्ने उस्तै हुन् त ? नैतिकताको प्रश्न उठेपछि राजीनामा गर्ने र सत्ताका लागि जे पनि गर्न उद्यत हुने उस्तै हुन् त ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरे ।
बाढीपहिरोले बैतडीमा पुर्‍याएको क्षतिको प्रधानमन्त्री...
मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रदेश...